को हुन निर्वाचन आयोगमा ‘नेकपा एमाले’ पार्टी दर्ता गर्ने ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार को हुन निर्वाचन आयोगमा ‘नेकपा एमाले’ पार्टी दर्ता गर्ने ?
को हुन निर्वाचन आयोगमा ‘नेकपा एमाले’ पार्टी दर्ता गर्ने ?
२०७७, १७ असार बुधबार ०७:४७
नेकपाभित्र सरकार तथा पार्टी सञ्चालनको विषयलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगमा ‘नेकपा एमाले’ नामको दल दर्ताका लागि निवेदन परेको छ ।
Previous article३ दिनमा २७ जिल्ला पुगे सलह, झुन्ड टुक्रिएर फैलने क्रम जारी
Next articleनेकपाको सत्ता–संघर्ष उत्कर्षमा, प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैतिक दबाब